Donald Trump anotumira maAmerican kumwedzi zvakare | TeraNews.net
VaDonald Trump vanoendesa maAmerican kumwedzi zvakare
Munyori Ekaterina Yakabudiswa pa 13.12.2017
Nharaunda yepasi rose yakashamiswa nenhau yaiuya kubva kuUnited States, umo mutungamiri we45 weAmerica, VaDonald Trump, vakasarudza kutumira vanoongorora nyeredzi kune imwe chete satellite satellite zvakare. NeMuvhuro, Zvita 11, mukuru weWhite House akasaina chirevo chinotendera NASA kuti iendesezve mauto emuchadenga eAmerica kumwedzi.
Chirevo chemutungamiri wenyika ndicho chikonzero chefambisirwo inotevera nezve chokwadi chekubuda kwakaitika, izvo zvakaitika gore re1972. Mushure mezvose, kukakavara kwe45 makore apfuura hakuna kuperera zvino. MaAmerican anosimbirira kuti akabhururuka kuenda kumwedzi, asi nekuwedzera zvakarekodhwa uye mafoto ane zvinyorwa zvevhidhiyo zvakananga pamusoro pevazivi venyeredzi chete, United States haina chinhu. Kana kuvhura dombo kubva pamusoro pePasi, kana kugadzwa nemishini dzedzimwe nyika dzekutizira kune satellite yekunyepedzera.
Zvichida, maAmerican vakasarudza kubvisa iyo gombo munhoroondo yavo uye, vachityora chirongwa cheMartian, vakasarudza kuisa mucherechedzo pamwedzi. Nyanzvi dzaifarira nyaya yekubhadhara mari iyi. Chokwadi, muUnited States, igore ripi rekushomeka kwebhajeti, saka hazvisi pachena kuti mabhiriyoni emadhora anobva kupi kuzadzisa iro basa rakatarwa nemutungamiriri.